Boqor Buurmadow oo sheegay in ay ka baxeen Doorashada Soomaaliya – XAMAR POST
By Mohamed Abdi On Jan 21, 2022
Boqor Cusmaan Aw Maxamuud Buurmadow oo kamid ah Nabadoonnada kasoo jeeda Gobolada Waqooyi ayaa sheegay in ay ka baxeen Doorashada ka socota dalka, isaga oo eedeyn u jeediyay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Buurmadow oo ay garab taagan yihiin Siyaasiyiin uu kamid yahay Guddoomiyaha Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa sheegay in Ra’iisul wasaare Rooble uu faragelin ku wado Doorashada kuraasta deegaanada Gobolada Waqooyi.
“Waxaan caddeyn in aan faraha kala baxnay Doorashada Soomaaliya, in uu maamulanayo Ra’iisul wasaaraha ayaa arragnaa” ayuu yiri Boqor Buurmadow.
Waxaa uu baaq u diray Madaxda Dowlad Gobolleedyada iyo Beesha Caalamka, si ay u soo fara-geliyaan Cabashada ay ka muujiyeen Doorashada.
Buurmadow oo ah Nabadoon ka soo jeeda Somaliland ayaa maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho, wuxuu dhowr jeer ka qeyb qaatay xallinta khilaaf u dhaxeeyay Guddoomiye Cabdi Xaashi iyo Ra’iisul wasaare ku xigeenka Xukumadda, Mahdi Guulleed.